Guardiola oo ka Hadlay Kulanka Chelsea iyo Tayada Horyaalka Premier league oo sii Adkaanaya | Warkii.com:-world news today for international news and videos from Europe, Asia, Africa, the Middle East and the Americas.
Home Ciyaaraha Guardiola oo ka Hadlay Kulanka Chelsea iyo Tayada Horyaalka Premier league oo...
Guardiola oo ka Hadlay Kulanka Chelsea iyo Tayada Horyaalka Premier league oo sii Adkaanaya
Pep Guardiola ayaa amaanay tayada Premier League iyadoo Manchester City ay isku diyaarineyso inay booqato kooxda ay xafiiltamaan ee Chelsea iyagoo leh xilli hore oo ay ku soo kabsadaan.
City ayaa fadhisa kaalinta shanaad ee kala sareynta ka dib markii si la yaab leh barbaro goolal la’aan ah ay ula galeen Southampton isbuucii hore, iyagoo durbaba lumiyay furitaankoodii ololahan cusub oo ay marti ugu ahaayeen Tottenham.
Ka dib markii ay xireen kooxda Ralph Hasenhuttl oo gurigeeda joogtay, City ayaa haatan ku guuldareysatay inay labo gool ka dhaliso shantii kulan ee ugu sarreysay, in ka badan 30-kii hore ee tartanka.
Si kastaba ha ahaatee, Guardiola ayaa doorbiday inuu xooga saaro tayada kooxda xilli ciyaareedkan maadaama tartanka horyaalka uu durba bilaabay inuu qaabeeyo, iyadoo Manchester United, Liverpool iyo Chelsea ay hormuud u yihiin, seddexda kooxood ayaa seddex dhibcood ka horreeya kooxda difaacaneysa horyaalka.
“Sannad walba xilli ciyaareedka labaad wuu ka adag yahay kan koowaad iyo kan saddexaad iyo kan afaraad,” ayuu Guardiola u sheegay suxufiyiinta shir jaraa’id oo ka hor ciyaarta Jimcihii.
“Runtii waa wax adag, tartan aan caadi aheyn. Laakiin waan aqbalnaa loolanka waana u soconaa.
“Waxay amaan weyn u tahay Premier League, tartamayaasha cajiibka ah, kuwa quruxda badan, maamulayaasha kooxaha oo dhan.
“[Waxaa jira ciyaartoy tayo sare leh koox kasta, 15-17 ciyaartoy oo aan caadi ahayn. Waa inaan halkaan joognaa oo aan ku raaxeysan karnaa Premier League-ga dalkan”
Kooxda Thomas Tuchel, oo diiwaangelisay 15 kulan oo nadiif ah Premier League 24 kulan oo ay ciyaartay tan iyo markii loo magacaabay tababaraha Jarmalka, ayaa badisay saddexdii kulan ee ugu dambeysay oo ay ka horyimaadeen City dhammaan tartamada.
Natiijooyinkaas ayaa waxaa ka mid ah finalkii Champions League ee xilli ciyaareedkii hore iyo waliba semi-finalka FA Cup, iyadoo Guardiola haatan laga badiyay kulamadii uu ka horyimid Blues in ka badan kooxaha kale (sideed).
Tababarihii hore ee Bayern Munich iyo Barcelona ayaa ku adkeysanaya in kooxdiisu aysan si kale u diyaarin doonin safarka Stamford Bridge, inkastoo natiijooyinkii ugu dambeeyay ay labada dhinac gaareen.
“Waxaan u diyaarinaa ciyaarta sidii aan u diyaarinay Southampton ka hor iyo kulamadii hore, isku day inaad akhrido waxay yihiin iyo wixii aan sameynay kulamadii ugu dambeeyay ee aan la ciyaarnay Chelsea,” ayuu sii daba dhigay.
“Ciyaar walba waa tartan cusub, si aad u horumariso oo aad wax u barato oo aad u fiicnaato.
“Champions League wuxuu ahaa kulan aad u baaxad weyn.
Previous articleArteta oo ka Hadlay Kulanka Arsenal ee ka hortageyso Kooxda Tottenham
Next articleABDULLAHI KASHKA OO KARIYAY CUNTO AAD U MACAN OO CAADI AHAYN TTK PART3